Sida loo dayactir Khaladaadka Loading DLL ee xawaaladaha
> Resource > Utility > Sida loo dayactir Khaladaadka Loading DLL ee xawaaladaha
Fariimaha baadi caamka ah ee DLL loading
Baadi Waxay tani dhacdaa marka barnaamij baaqeysaa file DLL ah in ay qabtaan howl gaar ah oo DLL qeexay inaan la rarin karo. Khaladaad kuwaas waxa badanaa lagu tilmaamay farriimaha kala duwan Baadi, sida:
• dumcp.dll loading Error. Module ayaa lagu qeexay lama hubin.
• vcs019.dll loading Error. Module ayaa lagu qeexay lama hubin.
• Error loading D: WINDOWScfdhtc.dll. Helitaanka beeniyay.
• Error loading C: WINDOWS / iovsgn.dll module cayimay lama hubin
Maxaa keena qalad ah in loading files DLL?
Haddii DLL ah ku guuldareysto inuu ku shuban waxaa jiri kara sababo badan oo baadi ah, hoos ku qoran waa kuwa ugu badan.
• DLL ama tilmaansado DLL ma aha ee buugga tusaha cayiman waddada.
• DLL Tixraaca DLL kale oo aan joogo.
• Baadi disk adag kharribteen ama dhaawac file DLL ah.
• file ma aha eedeysanuhu DLL.
• file ma aha a Microsoft Windows DLL.
• khaladaad kharimibo dar-yadaas codsiyada, iyo files DLL yaala oo ka hadhay cudurada saaro furin.
• spyware iyo cudurada adware, dhibaatooyin disk adag, dhibaatooyin diiwaanka Windows, iwm
Sida loo hagaajin qalad ah in loading DLL ee xawaaladaha?
Xalka 1: dib barnaamijka
Guud ahaan, reinstalling barnaamijka aad isleedahay in uu ordo noqon doonaa xalka ugu horeysay lagu taliyay si uu u xaliyo dhibaatada. Laakiin waa in aad had iyo jeer ka feejignow uninstalling barnaamijyada wadaaga files DLL. Marka aad uninstalling barnaamijka, Windows keeneysaa in in DLL ee ay wadaagaan barnaamijkan waxaa laga yaabaa in sidoo kale la wadaagaan software kale oo iyaga nadiifinta kuwa u isticmaali saamayn ku yeelan kara. Haddii aadan hubin in ama aan DLL la wadaagaan barnaamij kale, waxaa fiican in aad u tago.
Xalka 2: Clear iyo dayactiro diiwaanka
Marka hore, iskaan kombiyuutarka in la damaanad qaado deegaan nadiif ah nidaamka. Markaas cad oo lagu dhiso diiwaanka. Sida caadiga ah marka qalad DLL ku dhacdaa, diiwaanka Windows wax laga badalay waqti isku mid ah. Shaqada ugu weyn ee diiwaanka Windows waa si ay u qoraan tallaabo kasta oo ku saabsan nidaamka. Waa arrin adag in ay la tacaalaan waxaa la gacanta. Waxaad isticmaali kartaa diiwaanka nadiif ah qalab si uu shuqulka kuugu.
Xalka 3: Dayactir Windows
Haddii aad weli ma xallin karo dhibaatada, waxaad isku dayi kartaa in la dayactiro aad Windows. Waxaa jira qaar ka mid ah qalabka dayactirka Windows on suuqa kaa caawin karaan inaad si deg deg ah oo fudud u hagaajin DLL loading qalad ah, haddii aadan aqoon sida loo xaliyo iyaga gacanta.
Sida loo dayactir NTFS.sys Khaladaadka maqan ama kharribeen
Sida loo dayactir ama u saar Khaladaadka Loading NvCpl.dll
Sida loo dayactir Boot.ini la'yahay
4 Hababka inuu ka soo kabsado files lumay ama la tirtiro ka Mac si deg deg ah, si nabad ah oo si fiican.
Sida loo dayactir Computer Negeria ka dib markii xawaaladaha
Way faa'iido leh si ay kaaga caawiyaan dayactir Windows Blue Screen on Boot
Sidee si ay u haajiraan OS in SSD (Solide State Drive)
Sida loo dayactir gaabinta Disk Boot Insert System digsi
Sida loo dayactir BootMGR maqan Dhibaatada / Tifaftirayaasha in Windows 7 ama Vista
Sidee inay la midowdo qoruhu aan Loss Data
Way ku ool ah si ay u samee tirtiray Data Unrecoverable
Sida loo Copy & Barzakh Gadzhiyev inay xijaab / Hard Drive
Sida loo dayactir Khaladaadka Mscorwks.dll Fast iyo si fudud
Sida loo Dayactir Registry Khaladaadka on Computer